Unyango oluphezulu-i-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Okokuqala, kufuneka sazi ukuba kutheni imveliso ifuna unyango lomphezulu, yintoni umsebenzi, kwaye isombulula ingxaki enjani.
Okokuqala, indlela yonyango yomphezulu yokwenza umaleko wobuso kumphezulu we-substrate wezinto ohlukileyo kwizinto zoomatshini, zomzimba kunye neekhemikhali ze-substrate. Injongo yonyango lomphezulu kukuhlangabezana nokumelana nemveliso, ukunxiba ukumelana, umhombiso okanye ezinye iimfuno ezikhethekileyo zomsebenzi.
Abathengi abaninzi baya kusibuza ukuba kutheni sifuna unyango lomphezulu, yintoni umsebenzi, kwaye siyintoni isizathu sokongeza le nkqubo?
Abasebenzi be-Ouzhan:Unyango oluphezulu kukususa zonke iintlobo zezinto zangaphandle (ezinje ngeoyile, umhlwa, uthuli, ifilimu endala yepeyinti, njl.) Eziqhotyoshelwe kumphezulu wento, kunye nokubonelela ngesiqwenga esihle esifanelekileyo kwiimfuno zokwaleka ukuqinisekisa ukuba ifilimu yokutyabeka inokhuselo olulungileyo. Ukusebenza komhlwa, intsebenzo yokuhombisa kunye neminye imisebenzi ekhethekileyo, umphezulu wento kufuneka ulungiswe ngaphambi kokuba upeyintwe. Umsebenzi owenziwe lolu hlobo lonyango ngokudibeneyo kubhekiswa kuko njengaphambi kokupeyinta (umphezulu) unyango okanye (umphezulu) unyango lwangaphambili.
Unyango lomphezulu lwandisa ukuhlala ixesha elide kunye nokuxhathisa kwemveliso. Kwisiseko sokuqala, inyusa ixesha lokusetyenziswa kwaye igcina ixesha elininzi, indleko kunye nemali.
Le ndlela isebenzisa ukusabela kwe-electrode ukwenza ukutyabeka kumphezulu womsebenzi. Ezona ndlela ziphambili zezi:
(1) Ukuchongwa kombane
Kwisisombululo se-electrolyte, indawo yokusebenza yile cathode. Inkqubo yokwenza umphezulu ngaphezulu kwentshukumo yenyani yangaphandle ibizwa ngokuba yi-electroplating. Umaleko wesingxobo unokuba sisinyithi, i-alloy, i-semiconductor okanye iqulethe amasuntswana aqinileyo aqinileyo, afana nesingxobo sobhedu kunye ne-nickel.
Kwisisombululo se-electrolyte, indawo yokusebenza yile anode. Inkqubo yokwenza ifilimu ye-oxide phezu komhlaba phantsi kwentshukumo yangoku yangaphandle ibizwa ngokuba yi-anodization, enje nge-anodization ye-aluminium alloy.
Unyango lwe-oxidation lwentsimbi lunokwenziwa ngeendlela zeekhemikhali okanye zombane. Inkqubo yeekhemikhali kukubeka indawo yokusebenza kwisisombululo se-oxidizing, kwaye ixhomekeke kwisenzo seekhemikhali ukwenza ifilimu ye-oxide kumphezulu womsebenzi, njengokuhlaza kwesinyithi.
Le ndlela ayinasenzo sangoku, kwaye isebenzisa unxibelelwano lwezinto zeekhemikhali ukwenza isambatho kumphezulu womsebenzi. Ezona ndlela ziphambili zezi:
(1) Unyango lwembumba yokuguqula imichiza
Kwisisombululo se-electrolyte, into yokusebenza yesinyithi ayinayo inyathelo langaphandle langoku, kwaye into yemichiza kwisisombululo inxibelelana nomsebenzi ukuze yenze ukutyabeka kumphezulu wayo, obizwa ngokuba lonyango lwefilimu yokuguqula. Njenge-bluing, i-phosphating, i-passivation, kunye ne-chromium yonyango yetyuwa kumphezulu wentsimbi.
(2) Isingxobo sombane
Kwisisombululo se-electrolyte, umphezulu womsebenzi unyangwa ngokusebenzayo ngaphandle kwesiphumo sangoku sangaphandle. Kwisisombululo, ngenxa yokuncitshiswa kwezinto zeekhemikhali, inkqubo yokufaka izinto ezithile kumphezulu womsebenzi ukuze zenze ukutyabeka kubizwa ngokuba kukufaka okungafakwanga electroless, njenge-electroless nickel, i-Electroless plating plating, njl.
UKULUSA UKUSETYENZISWA KWE-HEAT
Le ndlela inyibilika okanye isasaze ngokuthe tye imathiriyeli phantsi kweqondo lobushushu eliphezulu ukwenza ukutyabeka kumphezulu womsebenzi. Ezona ndlela ziphambili zezi:
(1) idiphu eshushu
Inkqubo yokubeka into yokunyibilikisa yentsimbi kwisinyithi esityhidiweyo ukuze yenze ukutyabeka kumphezulu wayo ibizwa ngokuba yi-hot-dip plating, enje nge-hot-dip galvanizing kunye ne-hot-dip aluminium.
(2) ukutshiza kobushushu
Inkqubo yokwenza i-atomizing yentsimbi etyhidiweyo kunye nokuyitshiza kumphezulu womsebenzi ukwenza ukutyabeka kubizwa ngokuba kukutshiza kwe-thermal, njengokutshiza i-thermal zinc kunye ne-aluminium yokutshiza nge-thermal.
(3) Ukunyathela okushushu
Inkqubo yokufudumeza kunye nokucinezela i-foil yesinyithi ukugubungela umphezulu womsebenzi ukuze wenze umaleko wokutyabeka ubizwa ngokuba yistampu eshushu, njengokufaka isitampu eshushu sealuminium.
(4) unyango ubushushu Chemical
Inkqubo apho i-workpiece inxibelelana nezinto zeekhemikhali kwaye ishushu, kwaye into ethile ingena kumphezulu womsebenzi kubushushu obuphezulu ibizwa ngokuba ngonyango lobushushu beekhemikhali, njenge-nitriding kunye ne-carburizing.
(5) Ukujonga ngaphezulu
Ngokuwelda, inkqubo yokufaka isinyithi esibekiweyo ngaphezulu kwendawo yokusebenza ukuze yenze umaleko we-welding ibizwa ngokuba yi-surfacing, efana nokufaka iwelding nge-alloys enganyangekiyo.
INDLELA YOKUQHUTYWA KWE-VACUUM
Le ndlela yinkqubo apho izinto zikhutshwa ngomphunga okanye zibekwe ionized kwaye zibekwe kumphezulu womsebenzi phantsi kwento ephezulu yokuthambisa. Eyona ndlela iphambili yile.
(1) Ukufakwa komphunga ngokwasemzimbeni (PVD)
Phantsi kweemeko zokutshixa, inkqubo yokunyibilikisa isinyithi kwii-atom okanye iimolekyuli, okanye i-ionizing kwi-ions, ifakwe ngqo kumphezulu womsebenzi ukuze yenze ukutyabeka, okubizwa ngokuba kukubekwa komphunga ngokwasemzimbeni. Umqadi wamasuntswana ofakiweyo uvela kwizinto ezingezozamachiza, ezinje ngomphunga Ukuntywiliselwa kwesingxobo, ukuxhonywa kwe-ion, njl.
(2) ukumiliselwa kwe-Ion
Inkqubo yokumilisela ii-ions ezahlukeneyo kumphezulu womsebenzi phantsi kwamandla ombane aphezulu ukuguqula umphezulu ubizwa ngokuba kukufakwa kwe-ion, okufana nenaliti ye-boron.
(3) UkuBekwa kweVapor yeMichiza (CVD)
Phantsi koxinzelelo oluphantsi (ngamanye amaxesha uxinzelelo oluqhelekileyo), inkqubo apho izinto zegesi zenza indawo eqinileyo yokubekwa kumphezulu womsebenzi ngenxa yeempendulo zamachiza zibizwa ngokuba kukubekwa kwemiphunga yemichiza, njengokufakwa komphunga we-silicon oxide kunye ne-silicon nitride.
EZINYE IINDLELA ZOKUHLALA
Ngokukodwa iindlela zoomatshini, zeekhemikhali, zombane, kunye nezomzimba. Ezona ndlela ziphambili zezi:
Indlela engasebenziyo yokutshiza okanye yokubrasha yinkqubo yokusebenzisa ipeyinti (ye-organic okanye engaqhelekanga) kumphezulu womsebenzi ukwenza isambatho, esibizwa ngokuba kukupeyinta, njengokupeyinta, ukupeyinta, njl.
Inkqubo yokwenza umaleko wokutyabeka kumphezulu womsebenzi kunye nefuthe loomatshini ibizwa ngokuba kukufaka isiphumo, njengokuchaphazeleka kwempembelelo.
Unyango lomphezulu weLaser
Inkqubo yokuqaqambisa umphezulu womsebenzi nge laser ukutshintsha ubume bayo kuthiwa lonyango lomphezulu we-laser, njengokucinywa kwe-laser kunye nokulungiswa kwe-laser.
Itekhnoloji yokulungiselela ifilimu enzima kakhulu kumphezulu womsebenzi ngeendlela zomzimba okanye zemichiza ibizwa ngokuba yitekhnoloji yefilimu enzima kakhulu. Ezifana nefilimu yedayimane, ifilimu ye-cubic boron nitride njalo njalo.
I-ELECTROPHORESIS NE-ELECTROSTATIC Ukutshiza
Njenge-electrode, into yokusebenza ibekwa kwipeyinti ehambisa amanzi okanye enyibilikiswe ngamanzi, kwaye yenza isekethe kunye nenye i-electrode kwipeyinti. Ngaphantsi kwesenzo sentsimi yombane, isisombululo sokwaleka siye sahlulwa senziwa ii-ion zentsimbi, ii-cations ziya kwi-cathode, kwaye ii-anion ziya kwi-anode. Ezi ion ze-resin zihlawulisiweyo, kunye ne-adsorbed pigment particles, zifakwe kwi-electrophoresed ebusweni bomsebenzi ukuze zenze iingubo. Le nkqubo ibizwa ngokuba yi-electrophoresis.
2. Ukutshiza nge-Electrostatic
Phantsi kwentshukumo yombane wombane we-DC onamandla ombane, amasuntswana epeyinti atyholwe kakubi athunyelwe ukuba abhabhe kwindawo yokusebenza ehlawuliswe ngokuqinisekileyo ukufumana ifilimu yepeyinti, ebizwa ngokuba kukutshiza okumileyo.